ज्योति लाईफको कुल बीमा शुल्क आर्जन करीब ५० % बढ्यो
मंसिर १, काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा रू. ८१ करोड ७८ लाख २७ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको उक्त अवधिसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष कुल बीमाशुल्क आर्जन रकम ४९ दशमलव ८६ प्रतिशतय वृद्धि भएको हो । गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले रू. ५४ करोड ५७ लाख २४ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो ।
यस अवधिसम्म कम्पनीले गत वर्षभन्दा ६६० दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ७ करोड ९७ लाख ४४ हजार कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष कम्पनीले १ करोड ४ लाख ९२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको थियो । यस वर्ष कम्पनीको खुद नाफा भने २७ दशमलव ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष ७ करोड २२ लाख २२ हजार खुद नाफा गरेको कम्पनीले यस वर्ष रू. ९ करोड २२ लाख ८० हजार नाफा गरेको हो । कम्पनीको आम्दानी गत वर्ष रू. ८ करोड ६० लाख ६५ हजार रहेकोमा यस वर्र्ष ४२ दशमलव ३२ प्रतिशत बढी रू. १२ करोड २४ लाख ८९ हजार भएको छ ।
आईपीओ मार्फत चुक्तापूँजी बृद्धि गरी रू. २ अर्ब २० करोड पुर्‍याएको कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षभन्दा ४३ दशमलव ५३ प्रतिशत र जीवन बीमा कोष रकम १०१ दशमलव २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।
पहिलो त्रैमाससम्म कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ६६ करोड १० लाख २४ हजार र जीवन बीमा कोष रकम रू. ४ अर्ब ५४ करोड ७६ लाख ७६ हजार कायम भएको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. १६ दशमलव ०४ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १३३ दशमलव ६१ छ ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को मुनाफाबाट कुल १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको कात्तिक १४ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा ५ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसमेतका लागि ५ दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित लाभांश बीमा समितिको स्वीकृति पश्चात कम्पनीको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि वितरण हुनेछ । कम्पनीले सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेपश्चात पहिलो पटक लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । उक्त कम्पनीले सर्वसाधारणमा २०७७ साल फागुन २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म आईपीओ जारी गरी २०७७ साल चैत १३ गते बाँडफाँट गरेको थियो ।
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रस्ताव गर्‍यो १०.५३% लाभांश
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको कुल बीमाशुल्क आर्जन शतप्रतिशत वृद्धि